Qoysas ku xoolo beelay abaaraha oo ku dhibaateeysan qeybo ka tisran gobolka Gedo |
Qoysas ku xoolo beelay abaaraha oo ku dhibaateeysan qeybo ka tisran gobolka Gedo
Boqollaal qoys oo kasoo barakacay gobollada Bay, Bakool, J/dhexe iyo qeeybo ka tirsan gobolka Gedo ayaa gaaray degmooyin ka tirsan gobolka Gedo, ayadoo dadkani ay saameeyn ba’an ku yeesheen abaaraha ka jira Soomaaliya.
Qoysaskan oo u badan xoola dhaqato ku xoolo beelay abaaraha ayaa maalmihii ugu danbeeyay beegsanayay degmooyinka Baardheere iyo Doolow.
Gudoomiye kuxigeenka gobolka Gedo Sheekh Max’ed Yuusuf Xuseen (Al-Qaadi) oo la hadlay shabakadda HOL ayaa sheegay in boqollaal qoys ay soo gaareen degmooyinka Baardheere iyo Doolow, ayna dadkani ka muuqdaan diifta ay ku reebtay abaarta.
“Qoysaskan soo gaaraya degmooyinka Baardheere iyo Doolow ayaa ah dad aan heeysan haba yaraatee wax hanti ah oo ay dib ugu laabtaan, naftooda ayay kala soo baxsadeen abaaraha, waa dad ay ka muuqato dhibaato ba’an, una baahan in kaalmo deg-deg ah loo fidiyo,” ayuu gudoomiye ku xigeenka hadalkiisii raaciyay.
Qoysaskan ayaan helin wax kaalmo bini’aadanimo oo ku filan, marka laga reebo gargaar isugu jiray iyo biyo iyo raashiin oo aan ku filnayn oo ay gaarsiiyeen maamullada degmooyinka Baardheere iyo Doolow.
“Waxaan la xiriirnay gudiga gurmadka abaaraha ee heer federaal, waxaana uga warbixinnay xaaladaha adag ee halkan ka jira, balse ilaa hadda waxba lama soo gaarsiin qoysaskan, waanse rajeeyneeynaa in baaqeennu gaari doono,” ayuu gudoomiye ku xigeenka hadalkiisii raaciyay.
Abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa saameeyey dadka beeraleeyda iyo xoolo dhaqatada ah, ayadoo qeybo ka tirsan dalka ay dadku u le’anayaan oon iyo gaajo